N'ogbe Full Glass ákwà mgbochi Wall System Iwe Cladding Glass Facade Chinese iko emeputa na soplaya |Deshion
Ihe mkpuchi iko Walling
Mgbidi windo iko zuru oke
Mgbidi ákwà mgbochi iko kwadoro ntụaka
Sistemụ ihu igwe akwadoro Steel Truss Point
Mgbidi mkpuchi iko na-akwado Cabling Point
Mgbidi ákwà mgbochi iko akwadoro ígwè ọkpọkọ
Sistemụ Mgbochi Mgbochi
Ụdị Frame ekpughere
Ụdị etiti anaghị ahụ anya
Ụdị okpokolo agba ezoro ezo (Egopụtara kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ)
Ụdị okpokolo agba ezoro ezo (Egosipụta ezoro ezo na kwụ ọtọ)
Mgbidi ákwà mgbochi aluminum jikọtara ọnụ
Mgbidi ákwà mgbochi ígwè
Ogwe ihe mejupụtara aluminom
Aluminom mmanụ aṅụ panel panel
Ọnụ ụzọ aluminom & Windows
Ọnụ ụzọ Frame Aluminium
Ọnụ ụzọ ụlọ
Ọnụ ụzọ na-amị amị
Ọnụ ụzọ mpịachi
Windows Frame Aluminom
Window nke ụlọ
Windows na-amị amị
Tụgharịa ma tụgharịa Windows
Ngwongwo / okporo ígwè
Iron Railings arụrụ arụ
Ụzọ aka igwe anaghị agba nchara
Sistemụ nhazi ihe eji arụ ọrụ Grid Space Steel
Ụdị nchara nke ọtụtụ ụlọ ahịa
Sistemụ Ọdịdị Steel Ụdị Portal
Steel Truss Systems
Sistemu mgbidi mkpuchi iko zuru oke na-ekpo ọkụ na-ekpuchi iko ihu iko China
Aluminom Rail China Desi ...
Sistemụ igwe igwe & S...
Ogwe mkpuchi aluminom Hon...
103/112 Usoro omenala emere...
China Aluminom Frame Casem ...
Ihe owuwu mgbidi enyo zuru oke
Enwere ụdị abụọ maka ihe owuwu facade zuru oke, otu nwere ihe owuwu ribbed, nke ọzọ enweghị iko.
Iko ribbed: Iji mee ka isi ike nke iko iko sie ike, ọ dị mkpa iji enyo enyo dị ka ọgịrịga nkwado n'ebe dị anya, nke a maara dị ka iko ribbed.
Ogo kachasị elu nke facade iko zuru oke
Ọkpụrụkpụ iko (mm)
Ogo kacha (m)
Ụdị agbagoro n'ala enyo enyo facade
Nkọwa:Mgbe ịdị elu nke mgbidi ákwà mgbochi ahụ dị ala, a na-etinye enyo elu na rib glass na inlaying groove, na a na-edozi iko ahụ n'ime oghere dị n'okpuru ala, na-ewepụta ohere dị n'etiti elu nke elu nke elu na iko. , nke mere na iko ahụ nwere ohere maka mgbasawanye na nrụrụ.
Uru:Ọdịdị dị mfe, ọnụ ala dị ala, na-adabere na pedestal maka ibu ibu
Adịghị ike:Iko dị mfe na-ehulata na nrụrụ n'okpuru ya uka ibu, na-akpata visual oyiyi mgbagwoju anya.
Nkodo ụdị zuru iko facade
Nkọwa:Mgbe mgbidi ákwà mgbochi ahụ dị elu, iji gbochie iko ahụ ka ọ ghara ịdaba na mbibi n'okpuru ibu nke ya, a na-edozi ihe nrụnye ígwè pụrụ iche na njedebe elu nke mgbidi ákwà mgbochi ahụ, a na-etinyekwa nnukwu iko iko iji mepụta iko na-aga n'ihu. mgbidi ákwà mgbochi na-enweghị nrụrụ.Enwere oghere na-agbanwe agbanwe n'etiti iko na ala nke uzo ntinye.
Uru:Ọ nwere ike ikpochapụ mgbanaka iko nke sitere na àgwà nke ya ma mepụta mmetụta mara mma, nke doro anya na nchekwa.Ọ na-adabere na nrụnye igwe maka ibu ibu.
Adịghị ike:Ọdịdị ahụ dị mgbagwoju anya ma na-eri nnukwu ego
Ọ dịghị ribbed iko zuru iko ákwà mgbochi mgbidi
Ọdịdị ọnụ ọnụ
Usoro nrụnye iko
Ụzọ a na-ejikarị eme ihe bụ itinye nsọtụ nke nnukwu iko n'ime etiti ígwè ma dozie ya na silicone structural sealant.
E nwere ụdị atọ nke iko edozi usoro nrụnye, Mgbakọ ụdị akọrọ, mgbakọ ụdị mmiri, mgbakọ ngwakọta.
Mgbakọ ụdị akọrọ
Mgbe ị na-etinye iko, jiri akara akara (dị ka ihe mkpuchi rọba) dozie
Mgbakọ ụdị mmiri
Mgbe etinyere iko ahụ n'ime oghere ahụ, jiri mkpuchi (dịka ọmụmaatụ silicone sealant) mejupụta oghere dị n'etiti iko na mgbidi tank iji dozie ya.
A na-ejikọta ụdị akọrọ na mgbakọ mmiri mmiri n'otu oge.Buru ụzọ dozie eriri mkpuchi ahụ n'otu akụkụ, tinye ya n'ime iko, ma mesịa dozie ya n'akụkụ nke ọzọ na silicone sealant.
Mara:arụ ọrụ mkpuchi nke mgbakọ ụdị mmiri dị mma karịa nke ụdị akọrọ, na ndụ ọrụ nke silicone sealant dị ogologo karịa nke eriri mkpuchi roba.
Iko ribbed zuru iko ákwà mgbochi mgbidi
Intersecting elu Ọdịdị nke ribbed iko
A na-ahazi ntụziaka nke enyo elu nke ọgịrịga na-adabere na ebe na ọrụ nke ụlọ, na nkà chọrọ.A na-enwekarị ụdị nhazi atọ gbasara ọgwụgwọ mgbanaka nke iko ihu na iko ribbed: okpukpu abụọ, otu ribbed, Site na eriri.
Iko ribbed n'akụkụ abụọ, adabara n'etiti ime mgbidi
Iko ribbed n'otu akụkụ, kwesịrị ekwesị maka mgbidi dị n'èzí
Iko ribbed site n'elu iko, adabara nnukwu elu ákwà mgbochi mgbidi.
Intersecting elu ọgwụgwọ nke ribbed iko
A na-ejikọta iko ihu na ribbed site na silicone structural sealant transperent, na ọgwụgwọ nke intersecting elu nke ribbed iko bụ dị ka ndị a: N'azụ ụdị, Mounted seam ụdị, Flush ụdị, Protruding ụdị.
Ọgịrịga iko dị n'azụ nke enyo ihu, jikọtara ya na iko ihu na nrapado nhazi n'ozuzu ya.
Ọgịrịga enyo dị n'etiti enyo ihu abụọ, otu akụkụ nke ọgịrịga ahụ na-agbanye n'elu iko ihu, a na-ejikwa ihe nrapado nhazi n'etiti ọgịrịga na iko ihu abụọ.A ga-enwe aberration chromatic n'ọhụụ n'ihi oke nnyefe dị n'akụkụ dị iche iche
Ụdị onuete akwadoro
Ọgịrịga ugegbe dị na nkwonkwo nke enyo ihu abụọ, a na-ejikọta iko atọ na gluu nhazi.
Ọgịrịga enyo dị n'etiti enyo ihu abụọ ahụ, akụkụ abụọ na-apụta n'elu enyo ihu, a na-eji ihe nrapado kpuchie ọgịrịga na enyo ihu.
Ndozi nke iko ribbed zuru iko facade
Nkodo ụdị zuru iko ákwà mgbochi mgbidi
Ọnụ ụzọ kwụ ọtọ nke mgbidi ákwà mgbochi niile nwere ugegbe
1. Igwe ọkụ;2. Ọgịrịga iko na-ewe iwe;3. Igwe anaghị agba nchara nghọta mwekota usoro;
4. Ahịrị elu ụlọ;5. Gluo ihe nhazi
1.Hanging ụdị zuru iko ákwà mgbochi mgbidi
Ọdịdị nke mgbidi ákwà mgbochi enyo enyo bụ nke akụkụ atọ mejupụtara:
1.Upper na-ebu ibu nghọta Ọdịdị: ígwè nkwuba, ígwè ibé, nkwusioru hanga, inyinya nghọta fixture, nghọta mwekota ọla kọpa, esịtidem na mpụga metal clip, ndochi na akara ihe, ihu igwe na-eguzogide silicone sealant.
2.Middle iko Ọdịdị: iko panel;Efere ribbed iko, ihe mkpuchi silicone.
3.Lower frame Ọdịdị: metal frame, neoprene rubber pad, ụfụfụ na-ejuputa ihe, mkpuchi ihu igwe na-eguzogide.
1.Bolt echichi;2. ihe nkwado teel;
3.Steel osisi;4.External metal clip;
5.Internal metal clip;6.Slings;
7.Suspension mwekota efere;8.3mm SS ọwa ígwè profaịlụ;
9.Exterior imecha;10.Silicone sealant;11.19 mm iko;
12.Internal uko ụlọ;
Eserese nke ọnụ elu nke ụdị nghọta zuru oke mgbidi ákwà mgbochi
Eserese ọnụ ọnụ Frame
iko 1.19 mm;
5.3mm SS ọwa ígwè profaịlụ;
6.Foam na-ejuputa ihe;
1.The ọdịiche dị n'etiti gburugburu mechiri emechi groove mgbidi na iko panel ma ọ bụ iko ọgịrịga ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 8mm, ọdịiche dị n'etiti ala njedebe nke nghọta iko na ala nke ala uzo kwesịrị izute chọrọ nke iko elongation deformation. .A ga-akwado iko na ala nke oghere dị ala ma ọ bụ jupụta na mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na ogologo nke pad ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 100mm, ọkpụrụkpụ ọ bụghị ihe na-erughị 10mm, A ga-eji mkpuchi ụlọ silicone mechie ya n'etiti mgbidi cell. na iko.
2.N'elu mgbidi mkpuchi iko zuru ezu agaghị adị na kọntaktị na ihe ndị ọzọ siri ike.Ọdịiche dị n'etiti efere efere na elu ihe ịchọ mma ma ọ bụ ihe nhazi ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 8mm, ma mechie ya na sealant.
2.The elu ibu nghọta Ọdịdị
1.Steel hanga na doo
Tumadi họrọ Ọdịdị ígwè, iko ogwe na iko ọgịrịga na ndị ọzọ mmiri nke onwe ha uka ibu na ifufe ibu reliably zigara isi Ọdịdị.
2.Hanging okporo osisi, akpukpọ inyinya nghọta fixture na nghọta clip ọla kọpa mpempe akwụkwọ
Dị ka nha ibu nkwusioru si dị, a na-ekewa okporo osisi nkwudo na ihe nkwudo n'ime ọkọlọtọ nkịtị na ụdị dị arọ
Nhọrọ ihe nrụnye na-ebuli elu na tebụl nrụtụ aka dị elu chọrọ ihe owuwu
Na-eguzogide àgwà iko iko(KG)
Ụdị nkwụnye nghọta
Ogologo ihe owuwu achọrọ (MM)
Dị ka <450
Ụdị dị arọ
3.Internal na mpụga metal mgbachi
N'ime na mpụta metal clamps bụ ọnụ akara owuwu na elu akụkụ nke iko ákwà mgbochi mgbidi mgbe iko kwụsịtụrụ, ọ ka mma ịhọrọ igwe anaghị agba nchara.
A na-edobe iko ahụ n'akụkụ elu, nke mere na a na-ebufe enyo ihu n'otu n'otu na iko ọgịrịga na nchara ígwè mgbe ebufe ibu ifufe.N'otu oge ahụ, ọ bụkwa nkwụsịtụ na ọnọdụ mmechi nke ime ụlọ a kwụsịrị n'uko ụlọ na ihe ịchọ mma n'èzí na mgbidi mkpuchi iko zuru ezu.
Iji bulie ugogbe ihu n'ebe ahụ, dozie ihe nkedo nke ime n'ime, wee dozie mkpachị nke dị n'èzí na mkpuchi nrụnye mgbe a kwụsịrị iko ahụ.
Nkọwa 3.Material na arụmọrụ teknụzụ
iko a na-ekpo ọkụ, iko a na-ekpo ọkụ laminated wdg.
site na imewe na ngụkọ iji chọpụta, ihe a na-ejikarị eme ihe bụ 12/19mm.
kwesịrị ịchacha ma gbochie obere oghere mgbe ịchachara iko, ọdịiche ahụ dị mfe ịmepụta nrụgide nrụgide na-akpata na iko iko.
1. Ike mgbako:
A na-eji ihe nrụnye silicone mee ihe n'etiti iko ihu na iko ribbed, obosara na ọkpụrụkpụ nke nkwonkwo nrapado kwesịrị ịlele site na ike.
Ekwesịrị iji mkpuchi silicone na-anọpụ iche n'etiti iko na etiti igwe na eriri.
Silicone Ọdịdị sealant
Na nghọta ụdị full iko ákwà mgbochi mgbidi oru ngo, metal etiti lie n'okpuru ala ma ọ bụ na mgbidi dị mma iji 3mm oké igwe anaghị agba nchara uzo ígwè metal etiti.
Ntinye na usoro iwu nke ikowe mgbidi ákwà mgbochi iko
Ịkwụ ụgwọ → Nwụnye ihe owuwu nchara elu → Nrụnye etiti na akụkụ → Nwụnye iko → Tinye gluu na akara → Ọcha na nyocha.
Isi ihe nke nrụnye
1. The nha na ayak nke ákwà mgbochi mgbidi n'ọnọdu axis ga-yiri ma ọ bụ vetikal na isi Ọdịdị axis, nke mere na iji zere emegiderịta n'etiti ákwà mgbochi mgbidi ewu na ime ụlọ na n'èzí mma ewu, n'ihi na ntụpọ nke Yin na Yang. Nkuku abụghị square na ihe ịchọ mma n'elu adịghị adabara.
2. Jiri ọkwa laser dị elu dị elu, theodolite, dakọtara na teepu ígwè ọkọlọtọ, hama, onye na-achị ọkwa iji nyochaa.Maka mgbidi ákwà mgbochi nke dị elu karịa 7m, a ga-atụle ya ma lelee ya ugboro abụọ iji hụ na ọ bụ ihe ziri ezi nke mgbidi ákwà mgbochi ahụ.Ọdịiche dị n'etiti ahịrị etiti elu na nke ala ga-abụrịrị ihe na-erughị 1 mm ruo 2mm.
3. A ga-eme ihe nkwụsịtụ a tụrụ atụ mgbe ike ikuku adịghị elu karịa ike 4, njehie dị n'etiti wiwi n'ezie na ịbịaru imewe kwesịrị ịhazi ya, kesaa ma gbarie ya, ọ nweghị ike ịgbakọ.A na-edozikarị ya site n'ịgbanwe obosara nke oghere na nhazi nke etiti ahụ.Ọ bụrụ na njehie nha buru ibu, tụgharịa uche n'oge, ma megharịa iko ma ọ bụ jiri ngwọta ndị ọzọ nwere ezi uche.
5. All-glass ákwà mgbochi mgbidi bụ kpọmkwem fixes iko na isi Ọdịdị, mbụ bounce iko n'ala, na mgbe ahụ chọpụta arịlịka ebe dị ka elu ọnụ size.
2.Upper ígwè nhazi nhazi
1. Lezienụ anya na-elele agbakwunyere akụkụ ma ọ bụ anchoring ígwè efere siri ike, àgwà nke arịlịka bolt kwesịrị ntụkwasị obi, ebe nke arịlịka bolt ekwesịghị ịdị nso na nsọtụ nke mesikwuru ihe òtù, dayameta na omimi nke borehole. kwesịrị izute teknuzu stipulation nke arịlịka bolt emeputa, oghere uyi kwesịrị kpochaa elu.
2. The echichi ọnọdụ na elu nke ọ bụla akụrụngwa ga-siri ike na-aga n'ihu dị ka chọrọ nke wiring ọnọdụ na imewe eserese.Ihe kachasị mkpa bụ na ahịrị etiti nke eriri igwe na-ebu ibu ga-adaba na etiti etiti nke mgbidi ákwà mgbochi ahụ, na etiti nke oghere elliptical screw kwesịrị ịdị na-adaba na ọnọdụ nke ọkpụkpụ derrick a haziri.
3. Ntinye nrụnye nchara ígwè dị n'ime ga-adị nro ma kwụ ọtọ.Ọ dị mkpa iji ahịrị ndọpụta nke mpaghara mpaghara iji lelee ma kwụzie mgbagha nke ịgbado ọkụ kpatara.Ekwesịrị ịchịkọta mkpọchi mpụta ọla dị n'elu dịka ọnụọgụ nsoro ahụ si dị, ma chọọ ogologo.Oghere dị n'ime na n'èzí metal mkpachị kwesịrị ịbụ edo na nha kwesịrị izute imewe chọrọ.size.
3.Underframe na n'akụkụ etiti arịọnụ
Ewu dị ka wiring n'ọnọdu na imewe elu, niile ígwè Ọdịdị elu na weld nkwonkwo ahịhịa mgbochi nchara agba.Hichaa unyi dị n'ime oke ala.Opekempe 2 neoprene pad kwesịrị itinye na ala nke iko ọ bụla, na ogologo ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 100mm.
A ga-ebuli iko na ntinye n'ụzọ siri ike dabere na usoro iwu ụlọ
5.Silicone Sealant Injection na Cleaning
Ihe owuwu nke mkpuchi silicone na-eguzogide ihu igwe kwesịrị ịdị n'etiti 3.5 ~ 4.5mm, nkwonkwo mkpuchi dị oke mkpa adịghị mma maka ịdị mma nke mkpuchi ma gbochie mmiri ozuzo.Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị ime injection gluu na obere okpomọkụ nke na-erughị 5 ℃, n'ihi na okpomọkụ dị oke ala, gluu ga-agba ọsọ, na-egbu oge ọgwụgwọ, na ọbụna na-emetụta ike ike.Tinye teepu nrapado n'akụkụ ọnọdụ nkwonkwo iji gbochie silica gel imebi iko ahụ.Ọkachamara ịgba ọgwụ mgbochi roba.Mgbe gluu injection, na-eji pụrụ iche ngwá ọrụ scrape na gluu, na-eme ka onuete gluu bụ ubé concave elu.Ekwesịrị iji acetone ma ọ bụ ncha pụrụ iche hichaa iko na elu igwe nke akụkụ injection gluu dị ọcha, anaghị eji akwa mmiri na mmiri.
Nkwakọ ngwaahịa & mbupu
Nhazi ahaziri n'efu
Anyị na-emepụta ụlọ mmepụta ihe mgbagwoju anya maka ndị ahịa na-eji AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) na wdg.
Nchịkọta Ụlọ Ọrụ Mmepụta
Ụlọ ọrụ ígwè
Mpaghara akụrụngwa 1
Ụlọ ọrụ aluminom alloy
Mpaghara akụrụngwa 2
Igwe ịgbado ọkụ nke robotic arụnyere na ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Mpaghara ịgbasa akpaaka
Igwe ọkụ otutu otutu
1.What bụ gị mmepụta oge?
Ụbọchị 38-45 dabere n'ụgwọ ego enwetara na eserese ụlọ ahịa bịanyere aka na ya
2. Gịnị na-eme ka ngwaahịa gị dị iche na ndị ọzọ na-ebubata?
Kpọmkwem njikwa mma yana ọnụ ahịa asọmpi yana ahịa ndị ọkachamara na ọrụ injinia nrụnye.
3. Kedu ihe mmesi obi ike nke ị nyere na otu esi ejikwa àgwà?
Ewubere usoro iji lelee ngwaahịa n'oge ọ bụla nke usoro nrụpụta - akụrụngwa akụrụngwa, ihe eji arụ ọrụ, ihe enwetara ma ọ bụ nwalere, ngwaahịa emechara, wdg.
4. Kedu ka esi enweta nkwuputa ziri ezi?
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye data ọrụ ndị a, anyị nwere ike ịnye gị ngụ ziri ezi.
Ụkpụrụ imewe/koodu imewe
Ọsọ ifufe kacha
Ọsọ snow kacha
Oke mmiri ozuzo
Ụlọ ọrụ nkwado
Nke gara aga: 103/112 Usoro Omenala Emere Kere Eke Aluminom Tilt ma tụgharịa Ohere Casement
Osote: Ogwe ihe mejupụtara alumini & Aluminom Mpempe akwụkwọ Mgbochi Walling Deshion Ngwaahịa Nwụnye na mba ofesi
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ GuangDong Deshion Industry Co., Ltd
Dị ka mkpa gị si dị, hazie maka gị, ma nye gị ngwaahịa bara uru karịa.